GPS နည်းပညာအသုံးပြုမှု၏ ကောင်းကျိုး (၈)ချက် | Super Light Logistics
GPS နည်းပညာအသုံးပြုမှု၏ ကောင်းကျိုး (၈)ချက်
GPS နည်းပညာသည် ယနေ့ခေတ် ကုန်စည်ပို့ဆောင်သယ်ယူရေး ကဏ္ဏမှာ အပြည့်အ၀ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းအနေဖြင့်သာမက သင့်စားသုံးသူရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုပါ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်က သင်ကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ GPS လမ်းကြောင်းကြည့် နည်းပညာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သင့် မိုဘိုင်းဖုန်းထဲကနေ လွယ်လင့်တကူ သင့်ကားရဲ့ တည်နေရာကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ ကောင်းမောင်းသူရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကျိုးရှိရှိ စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဒီလိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းတွေဟာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေမြောက်မြားစွာပြုလုပ်ရခြင်း နှင့် များပြားလှသော အစီရင်ခံစာတွေကို ဖတ်ရှုပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်တော့ဘဲ အောင်မြင်သော logistics စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေမယ့် အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါသည်။
GPS နည်းပညာတိုးတက်လာမှုသည် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများအပေါ် အကျိုးအမြတ်များစွာ ဖြစ်ထွန်းဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သင်္ဘောတင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ၊ မော်တော်ယဉ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာများ ၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများ အစရှိသည်ဖြင့် များစွာသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများပေါ်တွင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ ထိုအရာများမှ GPS နည်းပညာကြောင့် ရရှိခံစားရမည့် အကျိုးအမြတ် ၈ ခု ကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။
၁။ မော်တော်ယာဉ်စုအားစီမံခန့်ခွဲခြင်း (Fleet Management)
ခေတ်မှီ GPS software တစ်ခုသည် သင်နှင့် သင့်မော်တော်ယာဉ်စုအား တစ်မူထားခြားသော အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင့်မော်တော်ယာဉ်စုထဲမှ မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးအား လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ပေးရန်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းတူထဲသို့ အခြား အလုပ်တစ်ခုအား ထပ်မံ သတ်မှတ်ပေးလိုသော်လည်းကောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲမှ သတင်းအချက်အလက်အပေါ် အခြေခံပြီး ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဆော့ဖ်ဝဲ အားအသုံးပြုပြီး လမ်းကြောင်းမှ ကွဲထွက်သွားသော မော်တော်ယာဉ်အား အချက်ပေးနိုင်ခြင်း နှင့် တာဝန်ချိန်အတွင်း အလွဲသုံးမှုပြုလုပ်နေသည့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းအား အသိပေးတားမြစ်နိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်၏ တည်နေရာအချက်ပြမှုကို မူတည်ပြီး မလိုအပ်တော့သော သို့မဟုတ် အဆင်မပြေသော ပို့ဆောင်မှုများအားလည်း ပယ်ဖျက် နိုင်သေးသည့်အပြင် ၊ လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုအားလည်း တည်ဆောက်ပြီး ခိုင်းစေနိုင်သည်။
ဖော်ပြပါအချက်များသည် မော်တော်ယာဉ်စုအား စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းနှင့် ကျစ်လစ်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းတို့တွင် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိသည့် အချက်များဖြစ်သည်။
၂။ စွမ်းအင်းအရင်းအမြစ်အား အဆုံးစွန်ထိ တိုးမြင့်ခြင်း (Resource optimization)
GPS နည်းပညာသည် သင်နှင့် သင့်၏ မော်တော်ယာဉ်မောင်း များအကြား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပိုကောင်းစေပါသည်။ GPS နည်းပညာ သုံးပြီး စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းများ၏ မရိုးဖြောင့်ခြင်းများအား ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး ၊ အကယ်၍သယ်ယူပို့ဆောင်မှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းများ ပစ္စည်း ဆုံးရှံးပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါက ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏အဓိက ရင်းမြစ်ကို တိုင်းတာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုအကြောင်းအရာသည် သင်နှင့် သင့်၏ မော်တော်ယာဉ်မောင်းများအကြား ယုံကြည်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး သံသယဖြစ်စရာ အကြောင်းအရာများအား ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
၃. မော်တော်ယာဉ်မောင်း၏ ဘေးအန္တာရယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေခြင်း (Driver safety & performance)
မော်တော်ယာဉ်မောင်းများသည် သင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ ကျောရိုးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရခြင်းသော်လည်းကောင်း ၎င်းတို့၏ ကောင်းမွန်သောကိုယ်စိတ်အခြေအနေဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရေးသည်လည်းကောင်း အရေးကြီးသည့် အချက် ဖြစ်ပါသည်။ GPS နည်းပညာဖြင့် မော်တော်ယာဉ်မောင်း၏ အပြုအမူပေါ်လိုက်၍ ၎င်း၏ ဘေးအန္တာရယ် ကင်းရှင်းရေးကို သေချာအောင် စစ်ဆေးနိုင်သည်။
တမူထူးခြားသော GPS နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး သင့်မော်တော်ယာဉ်မောင်းများမှ သတ်မှတ်မိုင်ထက်ကျော်လွန်မောင်းနှင်နေခြင်း နှင့် စည်းကမ်းမဲ့မောင်းနှင်နေမှုများမှ ရှောင်ရှားစေနိုင်သည့်အပြင် ကောင်းမွန်သည့် ယာဉ်မောင်းစွမ်းရည်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းများအား အသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်ပြီး ခံစားခွင့်များ နှင့် ဆုပေးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
4. အချိန်နှင့်တပြေးညီအကျိုးရှိစွာ အသုံးချခြင်း (Unmatched efficiency)
GPS ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခု အနေဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြစ်နေသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား အလိုလျောက် သင်၏ ဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာထဲသို့ ပေးပို့နေမည်ဖြစ်သည်။ ဒီအချက်သည်ပင်လျင် သင့်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ချမှတ်နိုင်ရန် များစွာ အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ မန်နေဂျာနှင့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းများအကြား များစွာသော စာရွက်စာတမ်းကိစ္စရပ်များကို လျော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထို့အတွက် အခြားသော လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ်တွင် ပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင် ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ GPS ဆော့ဖ်ဝဲ မှတစ်ဆင့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် လမ်းကြောင်းတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေသော မော်တော်ယာဉ်အား ၎င်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတူ ယာဉ်အား ချက်ခြင်းအသိပေးပြီး အကူအညီပေးခိုင်းနိုင်ပါသေးသည်။ အထက်ပါ နည်းလမ်းများကြောင့် GPS နည်းပညာသည် သင့်လုပ်ငန်း၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် အကောင်းဆုံးသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၅. စီမံအုပ်ချုပ်ရေး လိုအပ်ချက်များအားလျော့ချနိုင်ခြင်း (Reduce administrative resources)
မော်တော်ယာဉ်မောင်းများ၏ အခန်းကဏ္ဏအပြင် ရုံးခန်းအတွင်း နောက်တန်းမှနေ၍ ပံပိုးပေးရသည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသော ဝန်ထမ်းများတွင်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ဖိအားများ ရှိတတ်ကြပါသည်။ GPS နည်းပညာသည် မော်တော်ယာဉ်မှ သတင်းအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ယူနိုင်သည့် နည်းပညာဖြင့် နောက်တန်းမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရသည့် ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဖိအား တော်တော်များများကိုလည်း လျော့ချပေးနိုင်ပါသေးသည်။
၆. အသုံးစရိတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ခြင်း (Cost analysis/assessment)
သင့်အနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်၏ ဆီအသုံးစရိတ်များကို ခွဲခြမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းများ၏ ဆီအသုံးစရိတ် မြင့်မားနေမှုများကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အပြင် မော်တော်ယာဉ်မောင်းများ၏ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အလွဲသုံးမှုများကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ မလိုအပ်ဘဲ ဆီအသုံးစရိတ်များပိုမိုကုန်ကျအောင် သုံးစွဲနေမိသည့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းများအားလည်း သတိပေး တားမြစ်နိုင်သည်။မော်တော်ယာဉ်များ၏ လမ်းကြောင်းခံ နည်းပညာကို အသုံးပြုလျက် သက်တမ်းကြာနေပြီဖြစ်သည့် မော်တော်ယာဉ်ဟောင်း များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ၊ အသုံးစရိတ် နှင့် အကျိုးအမြတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
၇. အလွဲသုံးမှုများအား လျော့ချနိုင်ခြင်း (Minimal theft risks)
သယ်ယူပို့ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၏ အရှုံးအမြတ် ဝင်ငွေများစွာသည် လောင်းကြေးထပ်ထားသကဲ့သို့ ချိန်ခွင်လျှာပေါ်တွင် တည်ရှိနေတတ်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးချင်းစီ၏ အသုံးစရိတ် မြင့်မားမှုနှင့် မလိုအပ်ဘဲ များပြားနေမှုများသည်ပင်လျင် လုပ်ငန်းဝင်ငွေအား အလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကဲ့သို့သော ဆုံးရှုံးမှုများသည် မကောင်းသော ရိုက်ခက်မှုများအဖြစ် သင့်လုပ်ငန်း၏ ဂုဏ်သတင်းကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ GPS နည်းပညာသည် ထိုကဲ့သို့သော မလိုအပ်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် အသိပေးတားမြစ်နိုင်သည့် အပြင် ကျူးလွန်သူကိုလည်း သင့်လျော်သည့် အရေးယူမှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
၈. အရည်အသွေးပြည့်ဝသော စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှု (Quality customer service)
စနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုသည် နေ့အလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု အရေအတွက်ကို ပိုမိုသင့်တော်ဆုံး အကြိမ်အရေအတွက်သို့ ခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့်အပြင် သင်၏ ဖောက်သည်များအတွက်ကိုပါ ပိုမိုလျင်မြန်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိစေပါသည်။ ထိုအရာသည်ပင်လျင် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် နောက်ကျခဲ့ပါက သင့်ဖောက်သည်များထံသို့ တိကျသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မှုနှင့် ခန့်မှန်းရောက်ရှိနိုင်မည့် အချိန်ကိုပါ တိကျစွာ ခန့်မှန်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
GPS နည်းပညာသည် သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲပေးနိုင်သော ကောင်းကြိုးများစွာအား လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ ဆောင်ယူပေးနိုင်ပါသည်။ GPS နည်းပညာသည် အချိန်နှင့်အမျှ နည်းပညာပိုင်းအရ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိရာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ပုံမှန်ထက်ပို၍ အကျိုးရှိစေပြီး အချိန်ကာလများစွာတိုင်အောင် အကျိုးပြုအသုံးဝင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Super Light Logistics အနေဖြင့်လည်း GPS နည်းပညာအသုံးပြုပြီး ကုန်တင်ယာဉ်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ လမ်းကြောင်းပြေးဆွဲကာ Customer များထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် နည်းစနစ်ကျနမှုအတွက် အပြည့်အဝ အာမခံပေးနိုင်ပြီး မိတ်ဆွေတို့၏ လုပ်ငန်းများအလျင်အမြန် တိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် အသင့်ရှိနေပါတယ်။
#SuperLight #Logistics #Knowledge #8_benefits_of_using_GPS_system